Guddi Madax-dhaqameed ah oo Xal ka soo Saaray Khilaafka Dhismaha Wershadda Sibidhka Berbera | Ogaalnews	CIMILLADA HARGEYSA
TweetHargeysa, 30 July, 2012 (Ogaal)- Guddi ka kooban madaxdhaqameedka beelaha Subeer Awal, ayaa xalay go’aan ka soo saaray khilaaf in muddo ah ka taagnaa dhismaha warshadda sibidhka ee la doonayo in laga hirgeliyo magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil.
Warsaxaafadeed ay ku saxeexan yihiin 17 isugu jira Salaadiin, Ugaasyo iyo Boqor oo uu hormuud u yahay Suldaanka Guud ee beelaha Subeer Awal Suldaan Xasan Suldaan Cabdillaahi Suldaan Cabdiraxmaan oo xalay warbaahinta ka soo gaadhsiiyey ayaa lagu sheegay in shirar iyo kulamo is-daba joog ahaa oo socday muddo saddex bilood ah oo lagu dhexdhexaadinayey labada dhinac ee ku lugta lahaa khilaafka warshada sibidhka Berbera oo kala ah; Berbera Cement Company iyo Saaxil Cement Factory si rasmi ah go’aan looga gaadhay.
War-murtiyeedkaas oo lagu faahfaahiyey heerarkii dhexdhexaadintu soo martay iyo go’aanka laga soo saaray khilaafka dhismaha warshadda Sibidhka Berbera, waxa isagoo dhammaystiran uu u qornaa sidan;
“Saddexdii bilood ee u dambeeyey Salaadiinta beesha Subeer Awal waxay yeesheen kulamo iyo shirar is-joog ah oo ku saabsan sidii xal loogu heli lahaa muranka daba dheeraaday ee ka taagnaa dhismaha warshadda Sibidhka ee Berbera. Shirarkaas oo uu guddoominayey Suldaanka guud ee Beelaha Subeer Awdal.
Salaadiintu iyaga oo ka duulaya in warshad Sibidh laga hirgeliyo Berbera waxay ka hawlgaleen in la isku soo jiido labada dhinac, lana mideeyo muruqa, maalka iyo maskaxda, waxay ku dhaqaaqeen tallaabooyinka hoos ku qoran;
- Waxay kalsooni waydiiyeen labada dhinac ee khilaafku ku dhexjiray ee ah Berbera Cement Company iyo Saaxil Cement Factory, iyagoo labada dhinacba siiyeen kalsooni, isla markaana caddeeyeen inay aqbalayaan go’aanka Suldaanka Guud ee Beesha Subeer Awal iyo Guddi uu Guddoominayo ay soo gaadhaan.
- Salaadiintu waxay ku wargeliyeen dawladda Somaliland inay dhexdhexaadintaas gelayaan, kalsoonidana haystaan, taas oo dawladduna ku dhiirigelisay inay xal-u-raadiyaan khilaafka warshadda Sibidhka.
- Salaadiintu iyagoo xog urursanaya waxay kulamo gooni gooni ah la yeesheen waxgaradka, aqoonyahanka iyo ganacsatada Somaliland oo ay ka mid yihiin guddiyo hore isugu xilqaamay inay khilaafkaas xal ka gaadhaan.
- Salaadiintu waxa kale oo ay la kulmeen dhinacyada khilaafku ka dhexeeyey, iyagoo si gaargaar ah ula kulmay ganacsatada labada dhinac ka kala socda (Berbera Cement Company iyo Saaxil Cement Factory)
- Salaadiintu waxay labada dhinac u soo jeediyeen in muruqa, maalka iyo maskadaba meel la isugu geeyo, lana dhiso warshad keliya oo cusub oo weyn oo casri ah, taas oo sida wax loo wada yeelanayana ay salaadiintu u soo bandhigeen labada dhinacba.
- Nasiib-darro waxa genafka ku dhuftay go’aanka salaadiinta, isla markaana si cad u diiday dhinaca Berbera Cement Company, halka dhinaca Saaxil Cement Factory ay soo dhaweeyeen isla markaana ay aqbaleen go’aanka Salaadiinta.
- Salaadiinta Beesha Subeer Awdal markay u caddaatay in warshadda Sibidhka ee Saaxil Cement Factory ay ka mid yihiin qaar badan oo ka mid ah ganacsatada waaweyn ee reer Somaliland.
- Salaadiintu iyaga oo ka duulaya mabaadi’da wadahadal, wax-wada qabsi iyo iskaashiga ay ku soo caano-maashay bulshada reer Somaliland.
- Iyagoo tixgelinaya waajibaadka iyo masuuliyadda waddanimo ee faraysa in dhaqaalaha dalka iyo khayraadkiisaba laga wada qaybqaato, lagana ilaaliyo wax kasta oo dhabar-jebin ku ah horumarka dhaqaale ee Somaliland.
- Iyagoo tixgelinaya baahida waddanka iyo gaar ahaan ta magaalada Berbera u qabto mashaariicda noocan oo kale.
- Iyagoo maskaxda ku haya shaqo la’aanta baahsan ee dalka ka jirta iyo sida mashruucan oo kale wax weyn uga tarayo shaqo la’aanta ka taagan dalkeena iyo ta degaanka Berberaba.
- Iyada oo la baajinayo lacagta adag ee inagaga baxda Sibidhka dibadda laga keeno oo shacabka ku joogga qiimo qaali ah
Salaadiintu waxay soo saareen go’aamadan hoos ku qoran;
1. Waxaannu u soo jeedinaynaa xukuumadda Somaliland in sida ugu dhakhsaha badan ugu fududayso hirgelinta dhismaha warshadda cusub ee sibidhka ee shirkadda Saaxil Cement Factory ay doonayso inay ka hirgeliso deegaanka Gobolka Saaxil.
2. Waxa kale oo aannu xukuumadda Somaliland u soo jeedinaynaa inay shirkadda Berbera Cement Company ay xor yihiin inay dhisan karaan warshadoodii sibidhka, isla markaana ay dawladdu u fududayso wixii hawl ah ee kaga xidhan
3. Waxa kale oo u bannaan labada shirkadood inay midoobi karaan haddii ay dan u arkaan
4. Waxaannu shacabka reer Somaliland gaar ahaan shacabka Gobolka Saaxil u soo jeedinaynaa, kuna baraarujinaynaa inay soo dhaweeyaan cid kasta oo maalgaashi ku samaynaysa dalka Jamhuuriyadda Somaliland iyo Gobolka Saaxil, isna garab-taagaan.
5. Waxa kale oo aannu u soo jeedinaynaa ganacsatada iyo muwaadiniinta Jamhuuriyadda Somaliland ee gudo iyo dibadba ee danaynaya maalgashiga warshadda Sibidhka inay wax la qabsadaan labada shirkadood hadba kii ay door bidaan ama dantooda u arkaan.
Magacyada Salaadiinta Subeer Awal ee go’aankan saxeexay;
1. Suldaanka Guud ee beelaha Subeer Awal Suldaan Xasan Suldaan Cabdillaahi Suldaan Cabdiraxmaan
2. Suldaan Cismaan Suldaan Kooshin oo ah suldaanka guud ee beesha Ciise Muuse.
3. Suldaan Axmed Nuur Cabdillaahi Samaale.
4. Boqor Xasan Maxamed Siciid.
5. Suldaan Ibraahim Suldaan Sulub Nuur
6. Suldaan Maxamed Maxamuud Xandule
7. Suldaan Jaamac Cismaan Aadan
8. Suldaan Cismaan Sheekh Ibraahim Aw Maxamed
9. Suldaan Xuseen Ismaaciil Geelle
10.Suldaan Maxamed Daahir Cilmi
11. Suldaan Cali Saleebaan Maxamed
12. Suldaan Xiis Bare Yuusuf
13. Suldaan Mawliid Cali Ibraahim
14.Suldaan Xuseen Aw Muuse Cirday
15. Ugaas Ibraahim Axmed Kaahin
16. Ugaas Cabdillaahi Cabdi Xasan
17. Suldaan Ismaaciil Aadan Xirsi Baxar
Maxaad ka taqaanaa astaamaha Cudurka Qoorgooyaha iyo sida loo daweeyo ? - 32,861 viewsSomaliland: If Eritrea & South Sudan Could Gain Sovereignty, So Could Somaliland - 17,170 viewsSomaliland hopes for international recognition - 15,791 viewsGaddafi:’It’s a conspiracy to take our oil and a plan to re-colonise our country’ - 14,893 viewsHead of Uganda EC: I will announce winner within 48 hours - 11,776 viewsDalalka adduunka ugu farxadda badan iyo sida ay u kala horreeyaan - 11,552 viewsSomalia: Exposing the Hideous Face of the Puntland Regime - 11,452 viewsTel Aviv: Hostage Drama in Turkish Embassy - 11,171 viewsIGAD with the Largest Donors Delegation arrives Somaliland - 10,886 viewsSomaliland Coastguards and Ground Troops—The Real Panacea for Sea Piracy - 10,842 views